डा. केसी – Himalaya Television
१२ साउन २०७८ काठमाडौं । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै पुरा नगरे सत्याग्रह गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री...
बी एण्ड सी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन डा. केसीको माग
४ जेठ २०७८ काठमाडौं ।चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले झापाको बीएण्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन माग गर्नु भएको छ । विज्ञप्ति निकालेर डाक्टर केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले फर्जी कागज बनाएर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गइ निर्णय गरेको...
चिकित्सा शिक्षामा शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसप्रति डा. केसीको आपत्ति
११ माघ २०७७ काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमको शुल्क बढाउन गरेको सिफारिस प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । डाक्टर केसीले आज विज्ञप्ति निकालेर कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको आर्थिक स्थिति...
कोरोना संक्रमित डा. केसीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
२९ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भएका डाक्टर गोविन्द केसीको सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर केसीको सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्ने बताउनुभएको हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य...
दलका शीर्ष नेता र माफियासँग साँठगाँठ रहेको डा. केसीको आरोप (भिडियोसहित)
२० कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले दलका शीर्ष नेताको माफियासँग साठगाँठ रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले दलका नेताहरुले माफिया र विचौलियासँग...
सरकार र अनशनरत डा. केसीबीच ८ बुँदे सहमति
२५ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकार र अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । केसीले जुम्लाबाट थालेको अनशनको २७औँ दिनमा दुवै पक्षबीच गएराति त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। योसँगै डा. केसीले...